University of Bedfordshire ( UK ) နှင့် STI Myanmar University တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် Engineering သင်တန်းများ October Intake အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။
Hlaing University Campus Road, Hlaing Township, Yangon. phone : 01 507 151 email : info@stiedu.net
University of Bedfordshire ( UK ) နှင့် STI Myanmar University တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် BEng(Hons) Civil Engineering, BEng(Hons) Architectural Engineering, BEng(Hons) Civil Architectural Engineering, Electronic Engineering နှင့် BSc(Hons)Construction Management Foundation October Intake အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။
STI Myanmar University သည် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏ အသိအမှတ်ပြုကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ State-of-the-art Lab Facilities များ အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အတွေ့အကြုံရှိ ၀ါရင့်ဆရာဆရာမကြီးများမှ သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
1. AutoCAD Design Laboratory
2. Drawing Laboratory
3. Surveying Laboratory
4. Hydraulic laboratory
5. Structures, Materials and Concrete Laboratory
6. Soils Laboratory
7. Construction Engineering Workshop
8. Electronic Circuits Laboratory
9. Architecture Design Studio
September 15 ရက်နေ့ အမှီ လာရောက်အပ်နှံပါက 1st installment မှ USD 1000 လျှော့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် ရရှိခဲ့သည့် ဂုဏ်ထုး အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး (၁) ဘာသာထွက်ပါက ပညာသင်ဆုအဖြစ် ၁၀ သိန်းကျပ် ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပါမည်။
Introduction to Constrution Engineering
Chartered Institute of Building ( CIOB ), UK
Institution of Civil Engineering ( ICE ), UK
စသည့် အဖွဲအစည်းများတွင် အသင်းဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်ရပါမည်။
Hong Kong နိူင်ငံတွင် BBA in Management ဘွဲ့နှင်းသဘင်တက်ရောက်ခြင်း